Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Njem azụmahịa » Nweghachi nwayọ maka njem ụgbọ elu Post-COVID
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Site na ntiwapụ nke COVID-19 na-amanye ụwa ụlọ ọrụ ka ọ rụọ ọrụ na atụmatụ mbelata ọnụ ahịa, a na-atụ anya mmefu njem ga-enweta njikwa dị elu iji chọpụta ohere ịchekwa ego ọhụụ.
N'ihi ntiwapụ nke COVID-19, ụlọ ọrụ na-achọ ụzọ ha ga-esi belata mmefu ha.
Tupu ọrịa na-efe efe, ndị njem ụlọ ọrụ nọchiri anya ihe dị ka ọkara nke nnukwu ego ụgbọ elu na-enweta.
A na -atụ anya na njem ụgbọ elu maka azụmaahịa ga -agbada site na pasent 19.
N'ihi ego ha nwetara n'ihi ntiwapụ nke COVID-19, ụlọ ọrụ na-achọ ụzọ ha ga-esi belata mmefu ha. Nke a ebutela anya na njem ụgbọ elu ụlọọrụ. Tupu oria ojoo, ndị njem ụlọ ọrụ nọchiri anya ihe dị ka ọkara nke nnukwu ego ụgbọ elu na-enweta, na-eru pasent 1.7 nke GDP zuru ụwa ọnụ. Agbanyeghị, n'ihi nsogbu na -aga n'ihu, a na -atụ anya na njem ụgbọ elu maka azụmaahịa ga -agbada site na pasent 19.
Mgbe amachibidoro mmachibido njem njem n'ụwa niile, ụlọ ọrụ achụmnta ego na -anọchi nnọkọ ihu ọha na ndị mebere iji gbochie mgbasa ọrịa. Ọtụtụ azụmaahịa emebere maka nzukọ ndị mepere emepe ma achọpụtala na ọ bụghị nzukọ niile ga-abụrịrị n'onwe ya. Ụlọ ọrụ achụmnta ego achọpụtakwala nnukwu ego ịchekwa na njem ụgbọ elu.
N'ọdịnihu, njem ụgbọ elu ga-abụ ụzọ njem na-echebara echiche ma na-eche echiche nke ọma, na-enye ndị ọrụ ohere inwe nguzozi ndụ ka mma na ndị were ọrụ ga-enwe ezigbo nloghachi na itinye ego.
Ndị ụlọ ọrụ na -ahazi nzukọ mebere nke ọma na ihe nlereanya a aghọọla ọtụtụ n'ime ha. Ha achọpụtala na ọ bụghị mgbe niile ka achọrọ nzukọ onwe onye. Modeldị ngwakọ ngwakọ ọrịa na-efe efe nke na-ejikọ ihu na ihu na nhazi mebere nwere ike ime ka azụmaahịa na-aga nke ọma ebe ọ na-amachi ọnụ ahịa njem ụlọ ọrụ ahụ. Ndị ọrụ kwesịrị ịga njem naanị mgbe ọ dị oke mkpa. Nke a bụ ụfọdụ ihe ụlọ ọrụ na -eme iji belata njem azụmaahịa ụgbọ elu na ịkwalite ego ha nwetara:
Ijikwa ego: Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla na -eche ihe isi ike ihu n'ihi ọrịa na -efe efe na ọkwa dị iche iche. N'ime nke ahụ, ụlọ ọrụ ndị ahụ na-eleba anya n'ihe ndị na-ewepụta ego na-enweta ebe ọ bụla enwere ike. Amachibidoro njem azụmahịa dị n'elu ndepụta ha, ebe ha na-akagbu njem niile na-adịghị mkpa.